लभस्टोरी संकटमा छ, ब्युँताउन चाहन्छु : आर्यन सिग्देल (संवाद)
By soniya on	 15th July 2018 अन्तर्वार्ता, नेपाली, समाचार
अभिनेता एवं निर्माता आर्यन सिग्देल अहिले ‘कायरा’ प्रवद्र्धनमा व्यस्त छन् । ‘किस्मत’देखि सुरु उनको फिल्म यात्रा ‘कायरा’सम्म आइपुगेको छ । तर, उनलाई चिनाउने काम चाहिँ ‘मेरो एउटा साथी’ले गर्‍यो । हालैको एक शनिबार, गर्मिलो दिन, सिग्देल मूभिमान्डुसँग गफिए ।
लाजिम्पाटको हरियाली रेष्टुराँमा उनी भविष्यसँगै विगतप्रति केही नोस्टाल्जिक पनि सुनिए । गल्ती, सुधार र योजनाका तीन खाका लिएर उनी अघि बढेका छन् । १८ साउनमा उनी अभिनित ‘कायरा’ देशव्यापी रिलिज हुँदैछ । मूभिमान्डु सम्पादक विष्णु शर्माले सिग्देलसँग विभिन्न आयाममा कुरा गरेका छन् ।
खासमा ‘कायरा’मा तपाईंको पात्र कस्तो छ ? हामीले विगतमा देखेकै पक्ष हो वा नयाँपन दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ ?
मेरो क्यारेक्टर भन्दा : ‘लक्की फर एभ्रिथिङ, अनलक्की फर लभ’ । सबै कुरामा खुशि छ ऊ । जब लभको कुरा आउँछ, जहिले पनि फेलियर हुन्छ । उक्त लभ प्राप्त गर्ने संघर्ष जयको क्यारेक्टर हो ।
सबै प्रेम कथानक फिल्मको केन्द्र माया र महसुस नै हुन् । यीभन्दा कायरालाई कसरी भिन्न तुल्याइएको छ ?
जय क्यारेक्टर फ्रेस छ । त्यो क्यारेक्टरको लुक्स पनि फ्रेस नै छ । भनाइ छ नि, जो मान्छे धेरै हाँस्छ, त्यो मान्छेको मनभित्र धेरै पीडा लुकेको हुन्छ । यही विषयलाई उठाइएको छ । कथावस्तु पनि फ्रेस छ । दर्शकले फ्रेस नै फिल गर्नुहुन्छ ।
अहिले चलेको एक्ट्रेससँग तपाईंको अनस्क्रिन केमेस्ट्री कसरी निर्माण भएजस्तो लाग्छ ? साम्राज्ञीसँग काम गर्दाको अनुभव ?
जब स्क्रिप्ट लेखियो, हाम्रो सल्लाह भयो, यो स्क्रिप्ट साम्राज्ञीलाई एकदमै सुट गर्छ । उसले गरिराखेको पात्रभन्दा अपोजिट देखाउन सक्छौं भन्ने लाग्यो । उसलाई नै फस्ट अप्रोच गरेको हो । उसले भर्खर तीनवटा फिल्म गरेको, सेटमा आउँदा नयाँ कलाकारजस्तो फिल गराएन । एकदमै ड्याम प्रोफेसनल थियो । क्यारेक्टर बुझाउँदा चाँडै बुझ्ने । सेटमा गएर बुझाउँदा आत्मसात गर्ने भएकाले साम्राज्ञीसँग काम गर्दा एकदमै राम्रो भयो ।
लभस्टोरी जनरका फिल्म धेरै कम भैरहेको छ । दर्शकले मलाई धेरैभन्दा धेरै रुचाउनुभएको जनर नै लभस्टोरी हो । यसले गर्दा म आफै लभस्टोरी मेकिङमा आएको हो ।
कायरासम्म आइपुग्दा तपाईं आफूले आफैलाई कति परिपक्व महसुस गर्नुभएको छ ? विगतका कति गल्तीलाई सुधार्नुभएको छ ?
कामको अनुभव बढ्दै जाँदा मचुअरिटी स्वभाविकरुपमा बढ्दै जाने कुरा हो । ममा मचुअरिटी बढ्यो तर, कायरामा मेरो क्यारेक्टर मचुअर्ड हुन पाएको छैन । पात्र चाहिँ एमेचुअर छ । यो क्यारेक्टरले पहिले आर्यन सिग्देलले गर्ने चीज केही पनि गर्दैन । त्यो कुरा कडाइपूर्वक रोकिएको थियो । पहिलेका फिल्ममा देखिनेजस्तो हात र शरिरको चाललाई निकै कन्ट्रोल गरेको छु ।
तपाईं प्रायः टाइपो क्यारेक्टर गर्नुहुन्छ । प्रायःमा लभरब्वाइ । तपाईंलाई कस्ता क्यारेक्टर गर्न मनपर्छ ? ब्वाय मिट गल्र्जजस्ता फिल्मप्रति तपाईंको आकर्षण किन ?
मैले यी पात्रभन्दा बाहिर रहेर पनि सिनेमा गरेँ । क्रिटिकल्ली प्रशंसा गर्नु भएपनि बक्सअफिसमा सफलता हात पार्न सकेन । अहिले विभिन्न जनराका फिल्म बनिरहेको बेला, लभस्टोरी जनरका फिल्म धेरै कम भैरहेको छ । दर्शकले मलाई धेरैभन्दा धेरै रुचाउनुभएको जनर नै लभस्टोरी हो । यसले गर्दा म आफै लभस्टोरी मेकिङमा आएको हो । मलाई जुनपनि क्यारेक्टर गर्न रहर छ ।
जेसुकै पात्र आओस्, तर त्यसको कनेक्सन चाहिँ लभमा होस् भन्ने जहिल्यै इच्छा राख्छु । मैले एक्सन सिनेमा गरेपनि त्यो लभको कारणले एक्सन भन्ने चाहन्छु । देशभक्ति फिल्म गरेपनि लभले सपोर्ट गरोस् भन्ने चाहन्छु । लभले दर्शकलाई कनेक्ट गराउँछ ।
क्रिटिक्सले तपाईंको अभिनयलाई सँधै भन्ने गर्छन्, अभिनय स्टेरियोटाइप भयो, एउटै कुराको रिसाइकल भयो । आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो कुराको खण्डन गर्न चाहन्न । किनभने, लभस्टोरी सिनेमा भनेको रोमान्स, इमोसन्, सेन्टिमेन्ट यी चीजको वरपर घुम्ने हो । ती चीज घुम्दाखेरीका परिस्थिती बेग्लै होलान् । घुमिरहँदा खेरीको मायाको आभाष उस्तै पाउनुहुन्छ उहाँहरुले । यस कारणले स्टेरियोटाइप लागेको होला । म चाहिँ यसकुरामा इन्जोए गर्छु । म आफै खुशि छु, आफ्ना फिल्मसँग ।
दर्शकले त नयाँपन र ताजापनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् नि ?
लभस्टोरीमै फे्रस लभस्टोरी गर्न चाहन्छु म । उहाँहरुको चाहना पनि मैले लभस्टोरी नै गरिदेओस् भन्ने छ । पछिल्लो समय मैले दर्शकसँग अन्तक्रिया गर्दा उहाँहरुले त्यही चाहना राख्नुभएको छ । उहाँहरुको चाहना अनुरुप नै बनेको छ कायरा ।
तपाईंको करियरमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिल्म र पात्रमध्ये कुन छनौट गर्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो फिल्म, जसले मलाई विश्वमा चिनायो, मेरो एउटा साथी छ । म त्यो जय भन्ने पात्रलाई कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दिन । त्यसबेलादेखि कायरामा पनि मेरो पात्रको नाम जय नै हो । त्यो जयदेखि यो जय पात्रसम्मको यात्रामा विभिन्न पात्रहरु मनपरेका छन् । जस्तै, धुवाँ यो नशाको अभिको क्यारेक्टर मलाई एकदमै मनपर्छ । नोभेम्बर रेनको आयुषको क्यारेक्टर पनि मनपर्छ । क्यारेक्टर धेरै नै मनपर्छन् तर, सम्झँदाखेरी जय शमशेर जंगबहादुर राणा ।
लभस्टोरी सिनेमाको कुनैपनि वर्ग छैनजस्तो लाग्छ । मलाई देशभक्ति फिल्म गर्न मन छ । अहिलेसम्म राम्रो स्क्रिप्ट आइसकेको छैन मसँग ।
लभस्टोरी जनरका फिल्मको व्यवसायिक मूल्य नेपालमा कति छ ?
सिनेमा क्षेत्र भनेको एउटा जुवाजस्तो लाग्छ । भाग्यले पनि अर्थ राख्छ । लभस्टोरी सिनेमाले मलाई त अरु फिल्मले भन्दा पात्रलाई लामो जीवन दिन्छजस्तो लाग्छ । यदि लभस्टोरी सिनेमाको पात्रमा दर्शकले आफूलाई भेट्यो भने त्यो वर्षौंवर्षसम्म याद रहिरहने पात्र हुन् । निर्माण मूल्य पनि लभस्टोरी फिल्मको महंगो हुन्छ । आफूलाई उदाहरण राखेर भन्नुपर्दा, कमर्सियल्ली लभस्टोरी सिनेमा राम्रो हुन्छ । मेरा लभस्टोरी सिनेमाहरु कमर्सियल्ली धेरै राम्रा गएका छन् ।
दर्शकको मनमा टिक्न, लभस्टोरीमा जस्तो अरु कुनैपनि जनरमा टिक्दैन । यदि मार्केटमा लभस्टोरी सिनेमा राम्रो हुन थाल्यो भने निश्चितरुपमा त्यसले टिकाएरै छाड्छ ।
तपाईंलाई गर्न मन लागेको फिल्म कस्तो हो ? कायराले तपाईंको अभिनय करियरमा कस्तो अर्थ राख्छ ?
मैले गर्न खोजेको सिनेमा त लभस्टोरी नै हो । स्क्रिप्टले राम्रो चीज बोक्नुपर्छ । त्यसले अपर क्लासलाई पनि मान्यता दिँदैन, निम्न वर्गलाई मान्यता दिँदैन । लभस्टोरी सबै वर्गले मनपराउने चीज हो । सबैलाई भित्रसम्मै समाउने कुरा भनेको माया हो । एक्सनले नसमाउला, अरु चीजले नसमाउला, तर साझा चीज भनेको लभ हो । लभस्टोरी सिनेमाको कुनैपनि वर्ग छैनजस्तो लाग्छ । मलाई देशभक्ति फिल्म गर्न मन छ । अहिलेसम्म राम्रो स्क्रिप्ट आइसकेको छैन मसँग ।
कायराको पर्खाइमा रहेको दर्शकप्रति तपाईंको आग्रह के छ ?
बीचमा मेरो टाइम ग्याप भयो । ‘रुद्रप्रिया’ चलेन । बीचमा स्क्रिप्ट मन नपरेर त्यो प्रोजेक्ट पनि ब्याक गरेँ । यसले गर्दा म धेरै नै ब्याक भएको जस्तो महसुस भएको छ । दर्शकको इच्छाअनुसार साँच्चिकै मीठो र गहन लभस्टोरी लिएर आएको छु । आशा छ, उहाँहरुले गर्नुभएको अपेक्षालाई मैले पुरा गर्न सक्छु ।